IDA nesizathu sokugwiqika kweleMeya uPatricia De Lille - Bayede News
ABAHAMBI bendlela bahlale beluleka njalo ukuthi ipolitiki lena akuwona umdlalo wezimfundamakhwela. Abanye bathi kupolitiki akekho umngani noma isitha sangunaphakade. Konke lokhu kukhuluma kusuke kukhumbuza ukuthi njengomkhunhlane wona olala ungenawo uvuke usunawo, ipolitiki iyaguquguquka kanjalo nosopolitiki. La magama aseyaqala ukuba yiqiniso odabeni oluthinta lowo ozoshiya maduze nje, uma kugcina kwenzekile, kwesobuMeya eCape Town, uNkk uPatricia de Lille.
Ngokwesivumelwano anaso lo mholi neqembu lakhe iDemocratic Alliance (DA) okwamanje, kumele ehle esikhundleni kanjalo neqembu lingabe lisaqhubeka nemizamo yalo yokumqondisa ubugwegwe nokumxosha enhlanganweni. Lesi sivumelwano ngesikhathi sethulwa emphakathini savela njengempendulo kungqingetshe owabe ukhona. Zozimbili izinhlangothi okunguye uNkk uDe Lille noMnu uMmusi Maimane ongumholi weDA bathola imbobo yokuputshuka esimweni esabe sibaphoxa futhi sibafaka engcindezini njengabaholi kanye neqembu. Isivumelwano lesi nokwaduma ukuthi uMaimane wabe esenza yena njengomholi kepha engasekwa ngabanye kuDA, sabe sihlose ukuqinisekisa ukuthi leli qembu alingeni emkhankasweni walo wokhetho lwangonyaka ozayo lixhuga.
Ngokwesivumelwano uNkk uDe Lille kumele ahoxe esikhundleni ngesonto elizayo. Ukwehla kwakhe kuyobe kumenza angabi namandla okusebenzisa izimali zoMkhandlu ukuzivikela ezinkantolo. Lokhu kuyaziwa yiDA yikho ukuputshuka kombiko ongamakhasi ayizi-2,000 nokuthiwa wenziwe esikhathini esiyizinyanga ezili-10 yinkampani yabameli iBowmans kuzoguqula umdlalo. Ngokwembangi endala kaNkk uDe Lille uNkk uMazzone uthe lo mbiko uveza lokhu iqembu lakhe elabe likusho ‘okuwukungenelela nokwephula umthetho kweMeya’
Umbiko, owenziwe ngumqondisi wakwaBowmans uRandall van Voore‚ uveza ukuthi uDe Lille kanye nowayeyimeneja yedolobha uMnu u-Achmat Ebrahim bephula umthetho ngenkathi behluleka ukubikela uMkhandlu ngokukhokhelwa okungagunyaziwe kukashesi webhasi ngowezi-2015. Ubuye uthi uMkhandlu unesibopho sokubika izenzo ezisolisayo zenkohlakalo eziphathelene nethenda yamabhasi ahamba ngogesi nokuthi umkhandlu wedolobha kufanele uthathe izinyathelo zokuqondisa ubugwegwe ilungu lekomidi yemeya elibhekele ezezithuthi kanye nokuthuthukiswa kwedolobha uBrett Herron, ubuye umise uKhomishana Wezithuthi Nokuthuthukiswa Kwedolobha uMelissa Whitehead ngokungaziphathi kwabo ngokulindelekile odabeni lwethenda.
Akukho ukungabaza ukuthi abathile kuDA bangasebenzisa lo mbiko ukugadla kuNkk uDe Lille ikakhulukazi njengoba ezobe engasenawo amandla okusebenzisa izinsiza zoMkhandlu ukuzivikela. Khona lapho akukho ukungabaza ukuthi uNkk uDe Lille nabameli bakhe babazi ukuthi le mpi iyeza. Lesi sithombe sizodala ukulangazelela kwazi ukuthi ngabe iyozala nkomoni. Okusobala wukuthi iDA ayixolanga futhi imfuna obhuqwini uNkk uDe Lille.
Ukwenza kwayo kubonakala kunanokwesabela ukuthi uma esesulile eqenjini angahle aphume inqina ezobanyundela nokungabamisa kabi ngevoti lalabo ababizwa ngamaKhaladi kwehle ukwesekwa kwayo ikakhulukazi uma umbiko uzophuma ungemuhle.
nguMfo waKwaNomajalimane Nov 1, 2018